Chibage Chodhura Kupinda Kutenga Kunze
Hurumende yakadzika mutemo unorambidza kupinzwa munyika kwechibage uye kuti vanogaya upfu vatenge chibage kuGMB chete
Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti danho rehurumende rekurambidza kupinzwa kwechibage munyika uye kumanikidza varimi kutenga chibage muGrain Marketing Board, GMB, chete harina kunyatsofungisiswa nezvaro, sezvo chibage chemunyika chichidhura kudarika changa chichitengwa kunze.
Nyanzvi idzi dzinoti chibage chemunyika chiri kuita madhora mazana matatu nemakumi mapfumbamwe patani, zvichienzaniswa nemadhora zana nemakumi mana ari kutengwa nawo tani rechibage kuSouth Africa nedzimwe nyika dzakapoteredza Zimbabwe.
Mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Doctor Godfrey Kanyenze, vanoti rimwe dambudziko nderekuti havaoni chibage chiri kunzi maguta ichi chichisvika mwaka unouya, sezvo nyika yakanga isina goho rakanaka kwemakore maviri adarika.
Imwe nyanzvi yezveupfumi vachitungamira Employers Confederation of Zimbabwe, EMCOZ, VaJohn Mufukare, vatsinhirawo maonero aDoctor Kanyenze aya vachitiwo mutengo wekurima chibage munyika uri pamusoro kwazvo, izvo zvinozoitawo kuti mutengo wechibage ukwire.
Asi mukuru weimwe kambani inogaya upfu, yeBlue Ribbon Foods, VaYusuf Kamau, vaudza Studio 7 kuti vanotambira danho rehurumende iri sezvo nyika iine chibage chakakwana, uye rinowanisawo vanhu mabasa munyika.
Gurukota rezvekurima, VaJoseph Made, neChitatu vakazivisa kuti hurumende haichabvumidzi kutengwa kwechibage kunze.
VaMade vakazivisawo kuti vanogaya upfu vave kusungirwa kutenga chibage kuGMB, asi vachifanirwa kutanga vabhadhara mari kuhurumende vozopiwa matsamba ekuenda nawo kunotora chibage chacho kuGMB.
Hurumende inoti iri kutarisira maguta gore rino kuburikidza nechirongwa chekurima chinotsigirwa nehurumende cheCommand Agriculture.